Afar Waxyaabood Oo Aad Seegtay Hadii Aadan Daawan Kulankii Arsenal La Garaacay Shalay %
Arsenal ayaa khasaaro 2-1, waxayn kala soo kulantay dhigeeda Brighton, waxaana guul daradaan ay ka dhigan tahay Teedii Sideed oo xiriir ah dhamaan tartamaada oo dhan, mana jirto koox sidaan loo galay.
Sikastaba, Lewis Dunka iyo Murray ayay uga mahad-naqeysaa Birghton goolasha, halka Gunners-ka uu goolka madiga ah udhaliyay xidiga reer Gabon, ee bishii Janaayo yimid Gunners-ka ee Aubameyang.
Hadaba, Hoos Ka Arag Afarta Waxyaabood Ee Ku Dhaafay:
Jamaahiirta Arsenal Oo Ku Dibad-baxay Wenger
Swirro lasoo qaaday intii ay socotay ciyaartii ay Arsenal duul darada soo qaadatay ayaa waxay muujinayaa iyadoo taageerayaal reer Arsenal ah ay dal-banayeen in shaqada laga ceyriyo Arsena Wenger ama uu isaga iska baxo
“Wenger Bax” – “Ma Ahan 2019, Hadda Bax Wenger” – “Arsenal, Wenger oo kaliya ma ahan” ayaa kamid ahaa Oraahdyadii ay kusoo qorteen Boorarka ay wateen dadkii ku banaan-baxayay Wenger
Xanaaqii Anthony Knockaert
Laacibkaan oo garabka uga dheela Brighton, kaasoo ciyaarta laga soo saaray daqiiqadii 77aad ayaa markii uu yimid Kursiga keydka wuxuu muujiyay dareen xanaaq ah, isagoona Xitaa Feer isaga dhuftay Wadnaha.
Tani ayaa waxa umuuqataa inuu ka xun yahay bedalka lagu sameeyay, islamarkaana uu sii jeclaan lahaa inuu garoonka kusii jiro.
Jugtii Arsenal Oo Sii Socota
Kooxdaan ka dhisan Woqoyga London ayaa waxay sii wadaan natiijooyinka xun, kuwaasoo ay soo hoyneyso, waxaana guul daradaan ay ka dhigneed teedii Sideed oo xiriir ah dhamaan tartamada oo dhan.
Marka laga tago Arsenal-mooyee, ma jirto koox laga badiyay Tiradaan oo kale, dhamaan Shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub ama Xitaa horyaalka Premier League, ee wadanka Ingiriiska, waana Rikoor aad u xun.
Mesut Ozil Oo Gacmo-gashigii Isaga Siibay Garoonka
Daqiiqadihii ugu horeeyay waxaa la arkayay iyadoo Ozil uu watay Gacmo-gashi, hadana kadib markii uu yimid goolkii Murray, ayaa waxaa la arkay isagoo iska siibay, gabbi ahaanba bahiisha uu watay ama u Xirneed.
Ilaa iyo hada si dhab ah looma oga waxa sababay arrintaan, laakiin waxay ubadan tahay inuu u arkay mid aanan fiicneen ama Culeys uu u arkay.